I-Tatuantes yiwebhusayithi yeBlog yangempela yeBlog. Iwebhusayithi yethu inikezelwe Ihlabathi lobugcisa bomzimba, ngakumbi kwiitatoos kodwa nasekugqobeni nakwezinye iindlela. Siphakamisa uyilo lwantlandlolo ngelixa sizimisele ukubonelela ngalo lonke ulwazi malunga nendlela yokufumana iitattoos, ukhathalelo lolusu, njl.
Iqela labahleli beTatuantes lenziwe ndinomdla kwihlabathi leetattoo kunye nobugcisa bomzimba Ndonwabile ukwabelana ngamava abo kunye nolwazi kunye nawe. Ukuba ufuna ukubayinxalenye yayo, ungathandabuzi sibhale ngale fomu.
Umlandeli wesimbo senkcubeko yemveli kunye neeTattoo ezinqabileyo nezinqabileyo, akukho nto ifana nesiqwenga sebali elilungileyo emva kwayo. Njengoko ndingenakukwazi ukuzoba nantoni na eyintsonkothe ​​ngakumbi kunodoli wentonga, kuya kufuneka ndihlale ndizifundele, ndibhale ngabo ... Umntu oziqhenyayo wesithandathu (indlela yesixhenxe) iitattoos. Ukuqala kwam ukufumana tattoo, ndandingakwazi ukujonga. Ixesha lokugqibela, ndiye ndalala ebuthongweni.
Ukusukela ukuba ndimncinci, ndandicacile ukuba into yam yayikukuba ngutitshala, kodwa ukongeza ekubeni ndikwazi ukuyenza inyani, inokudityaniswa ngokugqibeleleyo kunye nolunye uthando lwam: Ukubhala malunga nelizwe leetattoos kunye nokubhoboza. Kuba lelona binzana lokugqibela lokuthwala iinkumbulo kunye namaxesha ahlala kulusu. Nabani na oba nye, uyaphinda kwaye ndiyitsho ngamava!
Kwiminyaka emininzi bendilithanda ilizwe leetattoos. Ndineendlela ezininzi kwaye ezahlukeneyo. Iklasikhi yesiNtu, isiMaori, isiJapan, njl. Kungenxa yoko le nto ndiyathemba ukuba uyayithanda into endizakuchaza ngayo nganye nganye.
UMaria Jose Roldan
Umama onetattoo, utitshala okhethekileyo kwezemfundo, ugqirha wengqondo kunye nothando lokubhala kunye nonxibelelwano. Ndiyazithanda ii-tatoo kwaye ukongeza ekunxibeni emzimbeni wam, ndiyakuthanda ukufumanisa kunye nokufunda ngakumbi ngazo. I tattoo nganye inentsingiselo efihliweyo kwaye libali lomntu ... kufanelekile ukuyifumana.
Ndinomdla kuyo yonke into endiyenzayo ngetattoos. Iindlela ezahlukeneyo kunye nobuchule, imbali yabo ... ndiyayithanda yonke le nto, kwaye leyo yinto ebonisa xa ndithetha okanye ndibhala ngazo.
Ndingumntu obesoloko ethanda iitattoos. Ukwazi ngabo, imbali, isiko, kunye nendlela yokuzinakekela yinto endiyithandayo. Kwaye wabelane ngolwazi lwam ukuze ukonwabele.
Ndazalelwa e-Barcelona kwiminyaka engamashumi amathathu anqabileyo eyadlulayo, ndide ngokwaneleyo ukuba umntu onomdla ngokwendalo kwaye angakhathali ukuba onwabele ukufunda ngeetattoos nokuba zibaluleke kangakanani kwinkcubeko yehlabathi. Kwakhona, sele uyazi ukuba "akukho mngcipheko akukho mnandi, akukho ntlungu akukho nzuzo" ... Ukuba ufuna ukwazi yonke into malunga neetattoos, ndiyathemba ukuba uyawavuyela amanqaku am.
Eyona nto ndiyithandayo ndiyithandayo. Okwangoku ndine-4 (phantse zonke ziyi-geeks!) Kwaye ngeendlela ezahlukeneyo. Ngokuqinisekileyo ndiza kuqhubeka nokunyusa isixa ndide ndizigqibe izimvo endinazo engqondweni. Ndiyathanda nokwazi imvelaphi kunye nentsingiselo yeetattoos.